Datin’ ny fifidianana : Hifandroritan’ ireo mpanao politika -
AccueilSongandinaDatin’ ny fifidianana : Hifandroritan’ ireo mpanao politika
Datin’ ny fifidianana : Hifandroritan’ ireo mpanao politika
18/06/2018 admintriatra Songandina 0
Ny faran’ny herinandro teo ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana no nitafa sy naka ny hevitr’ireo mpanao politika indray mikasika ny fanomanana ny fifidianana, nibahana tamin’ ny dinika izay nifanaovana ihany koa ny momba ny datim-pifidianana. Ao ireo izay milaza fa tokony hotanterahina ny fifidianana, ao kosa ireo izay milaza fa tokony mbola tsy hotanterahina aloha ny fifidianana raha toa tsy mipetraka ny filaminana sy ny fitoniana eto amin’ ny firenena. Nizara noho izany ny hevitra saingy hatreto dia mbola tsy nisy ny tapaka, satria dia fakan-kevitra ihany no notanterahina nandritra ny fihaonana. Marihina fa efa nisy ny soso-kevitra na daty telo izay efa navoakan’ ny CENI, dia ny datin’ ny alarobia 29 aogositra 2018 no akaiky indrindra hoy izy ireo, ahafahana manatontosa ny fihodinana voalohany amin’ny fifidiananana filoham-pirenena, ny daty faharoa dia ny alarobia 28 novambra 2018 izay daty manaraka ny voalazan’ny lalàm-panorenana, ary ny datin’ny alarobia 29 mey 2019 raha toa kosa misy ny fanemorana ny fifidianana.
Hatreto dia soso-kevitra ihany ireo voatanisan’ny CENI ireo, ary toraka izany ihany koa ny an’ ireo mpanao politika, satria dia mizara roa izao ny hevitra raha toa ny zava-misy amin’ izao fotoana no jerena. Voalohany dia efa voafaritry ny fanapahana navoakan’ny HCC fa tokony hotanterahina mialohan’ ny fotoana ny fifidianana raha toa tsy misy ny fifanarahana politika. Noho izany dia navoitran’ ny CENI nandritra ny fifampidinihana niarahan’izy ireo tamin’ireo mpanao politika io fanapahana izay navoakan’ ny HCC io. Ankilany anefa, ny praiminisitra ihany koa raha nihaona tamin’ ny mpanao gazety ny faran’ny herinandro lasa teo, dia nilaza fa tsy ho ela ny fihaonan’izy ireo amin’ ny CENI, ary hotapahina amin’izany ny datin’ny fifidianana. Midika izany fa mbola hisy ny fifampidinihina, izay miainga amin’ ny fanapahan’ny CENI, izay vao hiroso amin’ ny fanapahana ny datin’ny fifidianana ireo tompon’andraikitra .